Shiinaha sunnaha qalin sunta qurxinta sumadda gaarka loo leeyahay qalin-qaade qalin-yar oo muddo dheer soconaya iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qurxinta Iris
qalin suni qurxiyo sumad gaar ah oo muddo dheer socata qalin qalin sun ah
Qalin-baaruud farsamo-yaqaan bilaa-biyo ah oo bilaa-biyo ah, siman oo jilicsan. Qalin qalinku wuxuu soo jiidayaa timo yar yar. Si sax ah ayuu u qeexayaa qaabka indhashareerka indhaha.
Ku dhis dhismo qurxoon qurux badan qalinkeenna yar-yar ee Micro Eyebrow. Qalinkan mashiinka yar ayaa si sax ah u saxan, wuxuu xirtaa xitaa timaha ugu fiican oo leh midab muuqaal dabiici ah u eg.
Abuur bogag sharxan oo qeexan adoo buuxinaya tiro yar, cirifka maqaarka sare leh wuxuu sawirayaa xariiqyo ganaax aad u sarreeya, oo kuu oggolaanaya inaad sameysid muuqaalka timo boodhka dabiiciga ah!
Qaansoleydaadu waligood sifiican uma eegi doonaan ka dib markaad ku buuxiso maadadan kareemka leh, ee midabkeedu aadka u sarreeyo qalin suni!
Magaca Shayga Qalin suni
3. Si fudud oo fudud loo dalbado
4. Muddo dheer oo aan biyuhu oolin
Hore: vegan highlighter calaamadee khaas ah makeup qurxiyo customl highlighter makeup gaar ah oem highlighter palette
qalin suni qurxiyo sumad gaar ah
qalin suni qalin qalin
qalin suni sumad gaar ah
qalin suni qalin sumad gaar ah
qalin suni baalal biyuhu
qalin suni caato caato ah sumad gaar loo leeyahay